Global Aawaj | मैले नबुझेको लकडाउन मैले नबुझेको लकडाउन
मैले नबुझेको लकडाउन
१३ चैत्र २०७६ 6:17 pm
COVID 19 अर्थात कोरोनाभाइरस महामारीको त्राहिमाम संसारभरि नै छ। जता त्यतै लकडाउन भएको अवस्था छ। बिद्धतहरु जनमानसलाई सचेत गराउने शुभकार्यमा अनेक प्रकारले तत्पररत छन। आमजनमानसहरु सामाजिक संजालमा तस्विरहरु पोस्ट गर्दै अझ बढी सतर्कता अपनाउनकालागि प्रेरित गर्दैछन। सरकार स्वयं यस्तो जटिल भाइरस न्यूनीकरणका लागि दिन-रात खटिरहेको छ। सबै अथक रुपमा प्रयासरत छन। हुनत यस बिषयमा विश्लेषण गर्दै गर्दा सबैले यो पनि बुझ्न जरुरी छ की म लकडाउनको बिशेषज्ञ अथवा यसकार्यमा कार्यरत कुनै कर्मचारी होइन, यहाँ मैले नितान्त मेरा आफ्ना व्यक्तिगत विचारहरु प्रस्तुत गर्दै छु।
नेपाल सरकारले २३ मार्चमा लकडाउन घोषणा गरेसंगै विभिन्न सामाजिक संजाल तरंगित भयो अनि थुप्रै तस्विरहरु भाइरल भए। जसमा भारतीय प्रयोगकर्ताले पोष्ट गरेका तस्विर बढी रुचाइए जसमा प्रष्टसंग देखिन्थ्यो स्थानीय प्रहरीले नियम उन्लंघन गरेका आमजनतामाथी लाठी प्रहार लगायतका क्रूर अनि अमानविय सजाय दिदै तर्साइरहेका थिए, र यता नेपालमा पनि यसकै उपमा दिदै यस्तै यस्तै खालका सजाए नियम तोड्ने उपर लाद्नपर्ने कुराको वकालत गरिदै थियो। कतै कतै नेपाल प्रहरीले पनि यसकै देखासिकी गर्दै कसैलाई उठबस, मूर्गा अनि लाठी बर्साएको पनि भेटियो – देखियो। धेरैले यसको खुलेरै प्रशंशा गरे भने केहिले बिरोध गरेको पनि पढ्न अनि सुन्न पाइयो।
के लकडाउन भनेको घरभित्र बस्ने, बाहीर निस्कदै ननिस्कने, केही नगर्ने अनि गर्न नदिने हो ? मेरो बुझाईमा अवश्य पनि होइन। मर्निङ्गवाक, बजार गर्न, अत्यावश्यक सामाग्री खरिद गर्न सबै पाईन्छ, र पाउनु पर्छ पनि। तर यसरि बाहिर जादा अथवा जानु पर्दा आवश्यक सुरक्षा कवचहरु पहिरिएर मात्र जानु जसले गर्दा संक्रमित हुन बाट बचियोस अथवा अरुलाई संक्रमित हुनबाट रोक्न सकियोस। यदि यस्ता सुरक्षा कवच नभएको अवस्थामा भने सबै भन्दा सुरक्षित उपाय भनेको घरमै बस्ने अनि घरायसी काममा रमाउने हो जस्तो लाग्छ। फेरी अर्को ठूलो समस्या यहाँ के देखिन्छ भने यदि कुनै एक घरबाट कोही मर्निङ्गवाक गर्न निस्किहाले भने उनलाई फलो गर्ने प्रत्येक छिमेकी घरका सदस्यहरु हुन्छन। जिन्दगीभर मर्निङ्गवाक नगरेका अथवा नबुझेका मानिस पनि भोलिदेखि सबेरै उठेर नियमित गर्ने छन।”यो कोर्या कोरोना के नै होइछ … त्यसै डराउन मात्र दिए! “भन्दै संक्रमण फैलाउदै डुल्ने छन। यस्तो अवस्थामा लकडाउनको शाब्दिक अर्थ भनेकै कर्फ्यू अथवा निशेधाज्ञा हुनु पर्छ ।
अर्को प्रसङ्ग छ नियम तोड्नेलाइ सजाय के त?
नियम तोड्ने भनेका नियम नबुझ्ने हुन। हामीले यो स्वीकार्न जरुरी छ की हाम्रो देशमा अझ पनि अशिक्षित मानिसहरु छन। यसको विश्वासिलो प्रमाण भनेकै हामीले चुनबमा प्रयोग गरेको भोटबाट स्थापित भएको छ । शिक्षित अनि बुझक्कड घर भित्रै छन, र बाहिर जानै परे सम्बन्धित निकाय संग समन्वय गरेर, सुरक्षित भएर मात्रै निस्केका छन। नियम तोड्नेहरु जिज्ञासु छन। उनीहरु हेर्न अनि बुझ्न चाहन्छन यो लकडाउन भनेको बास्तवमा के हो? कस्तो हो? किन हो ? को – कसले नियम पालना गरेका छन, नगरेकालाई सरोकारवालाले के – कस्तो सजाय दिएको छ अथवा छैन आदी, ईत्यादी। उनीहरु आफ्नै जिज्ञासाको शिकार भएका छन। र यदि उनीहरुमाथि हामीले अमानविय तवरले सजाय दिदैछौ भने त्यो भनेको उनीहरूमाथिको अन्याय हो। उनीहरुमा ज्ञानको जरुरी देखिन्छ र त्यो ज्ञान भनेको लाठी, उठबस, मूर्गा कदाचित ठिक होइन। उनीहरुलाई सबैभन्दा पहिले यस महामारीको बारेमा सत्य-तथ्य बुझाउन जरुरी छ। यहाँ काल्पनिक प्रसंग अनि भ्रम सृजना गर्ने तत्वहरु अनेकौ छन, हावी भएका छन। हाम्रा मुख्य चुनौतीहरु भनेकै सत्यतालाई तोरमरोड़ गरेर आम जनतामा अफवाह फैलाउने र भ्रम सिर्जना गर्ने पात्रहरु हुन। आज पनि यदि हामी पौराणिक अनि परम्परागत सजायलाई बढावा दियौ भने यो निश्चित छ नेपालीमा चेतना अनि बिकाशले कदाचित साथ दिने छैन। यस्ता ग्रसित जिज्ञासुहरुलाई हामीले सृजनात्मक अनि कलात्मक सजाय तोक्न सक्यौ भने सायद उनीहरुले पाठ पनि सिक्ने छन अनि पुरै विश्वलाई आतंकित तुल्याइरहेको कोरोना बिरुद्ध एकजुट भइ लड्ने छन। हामीले स्वीकार्न जरुरी छ यो कोरोना भनेको एक्लै लडेर परास्त पार्न सकिने युद्ध होइन। यसलाई निर्मूल पार्न कुनै युद्ध लड्नु पर्ने पनि होइन।युद्ध लड्न परिहाले पनि हामी नेपालीमा त्यो सामर्थ्यता नै छैन। केवल एक -अर्कोको साथ, हौसला अनि सही मार्गनिर्देशनले यसलाई न्यूनीकरण गर्न अथवा भनौ परास्त पार्न सकिन्न्छ।